Ishukumiseka phezu kwetafula lombhede F-32
F-32 Ishukumisekayo ngaphezulu kwetafula lombhede F-32 Usayizi: L795 * W400 * H700 ~ 960mm isici esiyinhloko: 1. epoxy coated iron luhlaka ngebhodi eliphezulu lokhuni 2. ukuphakama kungalungiswa ngegesi-ntwasahlobo kusuka ku-700 kuye ku-960mm 3. isisekelo ngabasiki be-dia.50mm, amabili awo anamabhuleki 4. Ukwakha imigwaqo esindayo.
Ishukumiseka phezu kwetafula lombhede F-32-2
Ithebula le-F-32-2 High-density tafile ephezulu, engahambisani nemithi futhi elwa namafutha; Uhlelo lokuphakamisa ikholomu ye-aluminium. Muhle, uqinile futhi uqinile; Ukulungiswa okuguqukayo okuguquguqukayo kwetafula okuphezulu, okulungele ukudlela nokufunda; Ububanzi bezinsimbi ezingamasentimitha angama-50mm, eziguqukayo nezilula; Okuphezulu-okuphansi: 825-1115mm; Umthwalo wokusebenza: 20kgs; Ubukhulu be-desktop: 880mm × 425mm;
Ihamba phezu kwetafula lombhede F-32 (A1)
I-F-32 (A1) Ithebula le-Pein ephezulu, engahambisani nemithi futhi engamelana namafutha; Uhlelo lokuphakamisa ikholomu ye-aluminium. Muhle, uqinile futhi uqinile; Ububanzi bezinsimbi zeselula ezingama-40mm, eziguqukayo nezimo; Okuphezulu-okuphansi: 740-1115mm; Umthwalo wokusebenza: 30kgs; Usayizi ophezulu wethebula: 920mm × 400mm
Ishukumiseka phezu kwetafula lombhede F-33
F-33 ​​Ishukumisekayo ngaphezulu kwetafula lombhede F-33 usayizi: L770 * W380 * H750 ~ 1010mm isici esiyinhloko: 1. ifreyimu yensimbi ehlanganisiwe, ene-ABS engineering top board 2. ukuphakama kungalungiswa ngegesi kagesi kusuka ku-750 kuya ku -110mm; 3. base nge-di.50mm castors, ezimbili zazo zinamabhuleki 4. Ukwakha imigwaqo esindayo.
Ishukumiseka phezu kwetafula lombhede F-32-1
Ubukhulu be-F-32-1: L800 * W400 * H660 ~ 960mm isici esiyinhloko: 1. ifreyimu yensimbi ehlanganisiwe, enePhenolic top board 2. ukuphakama kungalungiswa ngegesi kagesi kusuka ku-660 kuya ku-960mm; 3. isisekelo esine-di.63mm castors, ezimbili zazo zinamabhuleki 4. Ukuqalwa kwamabhilidi okwakha imigwaqo.